WAA SIDEE XOG BAADHISTA SAXAAFADDU, SIDA MUSUQA,CADAALAD DARADA IYO WIXII LA MIDKA AH? QAYBTA 3 AAD: | Saxil News Network
WAA SIDEE XOG BAADHISTA SAXAAFADDU, SIDA MUSUQA,CADAALAD DARADA IYO WIXII LA MIDKA AH? QAYBTA 3 AAD:
March 18, 2015 - Written by admin
Waa Sidee Xog Baadhista Saxaafaddu, Sida Musuqa,Cadaalad Darada iyo Wixii La Midka ah?
Qaybta 3 aad:
Had iyo goor baadh wararka suurta galka ah. Mar marka qaarkood dadku waxay kuula imanayaan warar ku tidhi ku teen ah, laakiin badanaa adiga laftigaagu wariye waa inaad daaha ka rogto. Warka iyo fikradaha ku yimaada ee aad akhrido ama aad dhaga dhageyso,waxa laga yaabaa in si deg deg ah u ogaato. Suxufiyiinta baadhistoodu wanaagsan tahay kama suurto gasho inay bulshada u soo bandhigaan warar aan jirin. Laakiin waxay qoraan xogaha macquulka ah ee bulshada ka dhex jira,waxana laga yaabaa in xog jirta ama markaa uun sooIndhahaaga Hay Dhagaahaagana Fur
iftiimaysa inay wax ka qoraan oo mar danbe la arko.
Si caadi ah u dhageyso sheekada ku tidhi ku teenka ah, ee inta badan dadku iskugu sheekaynayaa marka ay basaska saran yihiin,marka ay jidadka iyo meelaha la iskugu yimaado joogaan ama ku caweynayaan. Kalmado aan loom eel dayin ayaa marka ugu horeysaba lagu xidhiidhina waxyaabo khaldan,laakiin waligaa ha qorin oo saldhig ha uga dhigin nuxurka baadhitaanka sheeko ku tidhi ku teen ah iyo mala awaal.
Maxaa yeelay baadhitaanka xoguhu macnaheedu waxa weeyi soo bandhigida xaqiiqooyin la qariyey,shaqadaadu wariye ma fududa inaad ka war bixiso oo umadda u soo bandhigto xogaha maxkamaddaha iyo kulamada bulshada.dadku waxay isku dayayaan wariye inay xogo badan ka qariyaan.waxa waajib kugu ah, inaad wax kasta oo xaqiiqada ku saabsan aad ka ururiso,dadka sida ugu macquulsan. Xogtaadu waa inay noqotaa mid sugan,sidaasi daraadeed had iyo jeer hubi macluumaadka aad soo ururisay ama aad heshay.
Ha filin natiijada baadhitaanku inay noqoto mid xiiso leh. Saxaafadda dhabta ahi waa dhif iyo nadir inay si dhakhso ah,ku soo bandhigto xogta.inta badan baadhitaanku wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo saacado badan macluumaad badana lagu soo ururiyo ,macluumaadkaasi oo faahfaahsan.wariya adiga iyo tifatirahaagu ogaada xaqiiqada jirta.adigu hadii aanad wakhti ku filan ku bixin,waxa laga yaabaa in aanad awoodin inaad ku guulaysato baadhitaanka xogta.
Isku Geynta Xaqiiqada
Marka aad xogta xaqiiqada ah isku geyso,xaqiiji macnaha ay sameynaso.baadhitaanka xogtu waxa weeyi macluumaad la isku geeyo.bilawgaba waa wax isku dhex yaacsan. Si yar si yar ayay macno u yeelanaysa. Mar kaliya ma helaysid macluumaadka oo dhan. Waa inaad ogaataa in wixii macluumaad ah ee ka dhiman xogta aad soo ururisay baadi doontaa.
Ogow waxaad soo bandhigaysaa macluumaad ay dadka qaarkood doonayaan inay qariyaan.baadhitaankaaga ma taageerayaan,sidaasi daraadeed xogtooda si fudud kuma xaqiijin kartid. Waayo waxa laga yaabaa inay ku mucaaradayaa,doonayaana inaad wax kasta oo aad qoraysaa ay noqodo wax khaldan. Oo hadii aad khalad qortana waxay kula beegsanayaan maxkamadda.adigu had iyo goor hubin xaqiiqada xogaha.talooyin ka qaado dadka caanka ku ah,baadhista,tusaale baadhitaankii saxaafadeed ee la odhan jiray WATERGATE, ee ay sameeyeen wariyayaal ka tirsanaa wargeyska WASHINGTON POST,sanadkii 1970-kii wariyayaasha baadhitaankaasi sameeyey oo noqday kuwa ugu caansan oo la kala odhan jiray Bob Woodward iyo Carl Bernstein,waxayna baadhitaan ku sameeyeen khaladaan badan oo ay galeen madaxweynihii maraykanka ee xiligaasi oo la odhan jiray Richard Nixson iyo koox ka ag dhaw oo la shaqeysata ,danbiyadaasi lagu helay waxay iskugu jireen musuq maasuq baahsan,sharci jabin iyo arimo kale oo badan oo markii saxaafadu soo bandhigat loo bixiyey fadeexadii WATERGATE,sababtayna in madaxweynihii maraykanka ee Richard Nixson uu xilkii iska casilo,waxana la yidhaahdaa waa madaxweynihii ugu horeeyey ee maraykan ee iska casila xilka madaxweynenimo.
Si kastaba ha ahaatee,xusuusnow in dad badan oo laga yaabo inaad waraysiyo ku saabsan arimo musuq maasuq la xidhiidha,laga yaabo inay iyaga laftigoodu galeen musuq. Danbiilayaan been ku sheegaya,marka dadka noocaasi ah,aad warasyanayso ama si caadi ah wax ugu sheegayso hubin kalmadaha ay ugu jawaabayaan,waxa laga yaaba in aad qaar ka mid ah aad rumaysato.
Marka la isku daro xaqiiqada la soo ururiyey,had iyo jeer waa inaad u heshaa xaqiiqo dhab ah oo badhitaaraysa. Gaar ahaan marka aad baadhayso xogo muhiim ah,oo aad ka baadhaysa maxkamadda sida gaf ama xad gudub aad baadhay oo aad heshy natiijadiisa baadhitaan.maxkamaduhu waxay aqbalaan oo kaliya wixii xaqiiqo dhab ah oo la xaqiijiyey. Hadii qof xog kugu siiyo duubitaan(on the Record) ,waad tusi kartaa maxkamada waana cadeyn, laakiin sidoo kale waxa muhiim ah, hadii la helo saxiixo laga hayo waa cadeyn.tani waxay qayb ka tahay cadeyn sharci oo adag.dukumeytiska asalka ah waxay maxkamaduhu u arkaan cadeyn,laakiin marka la koobi gareeyo waa maya,hadii aysan badhitaareyn cadeyn kale oo asalkii ah.
La Soco Qaybaha Danbe—–
Qoraalkii : Cali Maxamed (Cali Saxafi)